Linux Distros 100% yemahara yezvinhu "zvevashandi" | Kubva kuLinux
Linux Distros 100% yemahara yezvinhu zve "proprietary"
Uku ndiko kugoverwa kweGNU / Linux iyo zvinoenderana neFree Software Foundation (FSF) ine mutemo wavanoisa kuisa uye kupa chete yemahara software. Izvi zvinogoverwa zvinoramba zvisiri zvemaapplication, mapuratifomu epurogiramu, madhiraivha, uye firmware. Kana vakasanganisira chero nekutadza, vanobviswa.
Kana iwe uchinetseka kuti nei kumwe kugovera kusiri pane zvakanyorwa pazasi, ungangoda kuona iyo zvikonzero izvo FSF isingatsigire kumwe kugoverwa kwakakurumbira. Iyo inotsanangudza zvikonzero nei akati wandei kuzivikanwa kugoverwa kusinga svike zviyero zvakagadzwa neFSF.
Zvese zvekugovera zvakanyorwa pazasi zvinogona kuiswa pane yako hard drive, uye mazhinji anoshanda pasina kuisirwa. Izvo zvakarongedzwa nearufabheti.
BHAgi, BLAG Linux uye GNU, Fedora-yakavakirwa GNU / Linux kugovera.
Dragora (Arg.), Yakazvimirira GNU / Linux kugovera kunoenderana nepfungwa yekureruka.
Dynebolic, kugoverwa kweGNU / Linux kunoisa kukoshesa kwakanyanya pane odhiyo uye vhidhiyo kugadzirisa.
gNewSense (USA), kugoverwa kweGNU / Linux kunobva paDebian neUbuntu.
Kongoni ndeye yemahara GNU / Linux inoshanda sisitimu ine zita reAfrica mavambo. Iri zita rinobva mushoko reShona rekuti "gnu" (rinozivikanwawo sekuti connochaetes).
Musix GNU + Linux (Ar.
Trisquel (Spain), kugoverwa kweGNU / Linux kwemabhizinesi madiki, vashandisi vekumba uye nzvimbo dzekudzidzisa.
Venenux, yemahara yekuparadzira yakavakirwa kutenderedza iyo KDE desktop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Linux Distros 100% yemahara yezvinhu zve "proprietary"
Hapana kana chinoshaikwa !!
Teerera! : S
guzman6001 (reprasol) akadaro
Ini ndinoshandisa Venenux ... Zvinoita senge inoshamisa distro.
Pindura guzman6001 (reprasol)
Venenux yakanaka chaizvo ... imwe yemashoma 100% Yemahara inouya ne KDE.
Kwete. Sezviri pachena haisi, zvirinani kune iyo FSF. Nekudaro, izvo zvemukati zvemukati zvinofanirwa kuve zvishoma.
Pane zvimwe zvandanga ndisingazive, ndatenda neruzivo
Victor hernandez akadaro
Ndine urombo nekusaziva, asi ndakanzwisisa kuti Debian akawirawo pasi pemusoro wenyaya 😀
Pindura Victor Hernandez
Kwandiri chakanakisa ndeyeLUUX CANAIMA yakavakwa pasi pehurumende yeBolivarian yeVenezuela Nemutungamiri wedu Hugo Rafael Chavez frias
Debian iri mune yemahara distro, zvisinei haina kuisirwa mune iyo distros yechikamu icho nekuti inochengetedza uye ine isina-yemahara uye inopa marekodhi pane ayo maseva.
Pazasi mutsara kana vakangoshandisa main repository, iwe unowana 100% yemahara distro.
Kupotsa Parabola GNU / Linux, Chilean distro, yakavakirwa paArch Linux, asi yemahara, isina zvivakwa.
Ndakanga ndisingamuzivi. Ndiri kuenda kuiyedza.
Sahana: nyoro. vakasununguka kupa rubatsiro rwevanhu
Maitiro ekutsiva iyo gap iyo yakasara Last.fm muhupenyu hwedu